I-TS Galaxy ihlose ukunyukela phezulu endaweni yesishiyagalombili | Scrolla Izindaba
I-TS Galaxy ihlose ukunyukela phezulu endaweni yesishiyagalombili
Iqembu elisanda kufika ku-DStv Premiership i-TS Galaxy inethuba elihle lokunyukela endaweni ephezulu yisishiyagalombili okokuqala ngqa ngaphansi kuka-Owen Da Gama. Selokhu uDa Gama ethathe izintambo kuDan Malisela ekuqaleni kukaMasingana usesebenze kanzima emidlalweni emine yeGalaxy.
Unqobe emibili, wadlala ngokulingana wahlulwa komunye futhi okuxakile ukuthi lokho kwehlulwa kufike ezandleni zikaMasilela kuChippa United. Lowo bekungumdlalo wokuqala kaDa Gama noMalisela emakilabhini abo amasha.
Ngemuva kwalokho kwehlulwa, iGalaxy idlale imidlalo emithathu yaqoqa amaphuzu ayisikhombisa abasuse ezansi ku-log baya endaweni ye-11 futhi basele ngamaphuzu amathathu ukufinyelela endaweni yesishiyagalombili. NgoMgqibelo bazobhekana neChippa abagcina ukunambitha ukuhlulwa kuyo.
Umbango uzoba eNelson Mandela Bay Stadium ngo-3.30 ntambama. Umdlali wasesiswini weGalaxy uMlungisi Mbunjana ulithokozele ithuba lokubhekana neChippa futhi.
“Kuhle ukuthi asikahlulwa kulo nyaka. Sibenenhlanhla yokuthi sikwazile ukuthola amaphuzu aminingi kude nasekhaya,” kusho uMbunjana.
“Umdlalo esingawunqobanga ingesikhathi sidlala ngokulingana ne-Orlando Pirates kodwa waba umphumela omuhle. Silangazelele ukubhekana neChippa. Sibalungiselele ngendlela efanayo naleyo esenze ngayo ngesikhathi sihlula iMaritzburg United neBlack Leopards ekuhambeni.”
Ngakolunye uhlangothi iChippa ihlabe umxhwele ngaphansi kukaMalisela. Sebedlale imidlalo emihlanu abawine emibili kuyo, badlala ngokulingana bahlulwa kwemibili.
Umdlalo wabo wokugcina badlale ngokulingana ngo 1-1 neBloemfontein Celtic ngoMgqibelo odlule. Umgadli weChippa u-Eva Nga Bienvenu oshaye igoli lakhe lokuqala kule sizini nelokulinganisa ngesikhathi bedlala neCeltic uthe, bayazi kahle iGalaxy.
“Siyayazi iGalaxy, beza kithina befuna amaphuzu amathathu. Kodwa siwulungiselele kahle umdlalo. Kungakuhle ukuthi sithole amaphuzu amathathu. Sifuna lawo maphuzu abalulekile kithina,” kusho u-Eva Nga.
“Ngijabule kakhulu ngokuthola amaphuzu okugcina futhi okubalulekile ukuthi bekwigoli lokulinganisa futhi sathola iphuzu ekuhambeni. Ngaphandle kwalokho, kunginike nokuzethemba ebengikudinga.”